Ukusetyenziswa ngokuSebenzisekayo kweMifanekiso kaGoogle yoMhlaba-iGeofumadas
Ukusetyenziswa kwezithombe zembali ezivela kuGoogle Earth
NgoDisemba, 2011 Google umhlaba / imephu
Yenye yezona nguqu zibalaseleyo ezaphunyezwa nguGoogle Earth kuhlobo lwesi-5, oluthi, ngelixa lisivumela ukuba sibone ukuba yeyiphi imifanekiso yonyaka epapashiweyo, yenza kube lula kuthi ukuba sisebenzise esona sisombululo silungileyo okanye ukubaluleka kweenjongo zethu. Kwiimeko ezininzi, kuba owona mfanekiso mvanje unamafu afihla into esinomdla kuyo kwaye kwezinye iimeko kuba inqanaba leenkcukacha belingcono.
Ukubona imbali, yenza i icon yewotshi encinci, emva koko ungarhuqa ibha ukuya kwimihla yokutshintsha komfanekiso. Nangona ezona zinto ziluncedo zikwizaphetha eziphela esiphelweni, ezikhokelela kulandelayo, ngentla apha ungawubona umhla owabhalwa ngawo (mhlawumbi ngunyaka owawuthathwe ngawo), hayi ukuba ulayishwe kuGoogle Earth.
Ukubonisa lo mzekelo, weprojekthi endifuna ukuyifumana.
Lo mfanekiso January 2010, bona i umda polygon abakwazi ukubona, nangona izakhiwo ukusuka phezulu sele yakhiwe kwaye iinjongo Cadastre zibalulekile ngakumbi kuba zibandakanya nokuhlaziya yokuphuculwa.
Oku kususela ngoNovemba 30, 2007, kwiminyaka emi-4 ngaphambili kwaye ubone ukuba ucace kangakanani umda. Izakhiwo ezitsha azibonwa ngasentla kwaye yonke enye ifoto igutyungelwe lilifu elinomsindo. Ekuphela kwento endingenakuyisombulula kukuba xa uzikhuphelela ngeStitchmaps, ibha yembali ibonakala iphazamisa kwifoto nganye; omnye wamagcisa am wayedla ngokuqhula esithi sixelela abantu ukuba zizikhundla ezingaqhelekanga.
Kwaye ukugqibela kuthatha iprogram ye-urban planning, i-inshurensi kwiminyaka emine inokubonakala ibonakala kuphuhliso.
Kwimiba ye kuchaneka... yintlekele, kuba phakathi kokudutyulwa kwenye kunye ukuya kuthi ga kwi-14 yeemitha zomahluko ... kwaye akukho kufutshane nenyani. Kodwa ngeenjongo zempembelelo, ukuba kukho nayiphi na inzuzo kwinto eyenziwe nguGoogle Earth kunye neMephu zikaGoogle, kukuba izise i-geolocation kusetyenziso lwemihla ngemihla.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iinkqubo ezili-13 ze-GIS onokungazi ngazo
Post Next 5 Yintoni entsha kwi-AutoCAD 2013Okulandelayo »